चिनियाँ राजदूत यान्छी किन बालुवाटार छिर्न पाउँदिनन् ?:: Mero Desh
चिनियाँ राजदूत यान्छी किन बालुवाटार छिर्न पाउँदिनन् ?
Published on: १६ चैत्र २०७७, सोमबार २१:२६
“काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा चिनियाँ चासो बढ्न मात्रै थालेको छैन, समीकरण फेरबदलमासमेत भूमिका नि’भाउन थालेको छ । केही वर्ष अ’घिसम्म नेपालको राजनीतिप्रति खुलेर चासो न’राख्ने चीन अहिले आफ्नो राजदूतलाई नेताहरुको घर’दैलोमा पठाएर दल’हरुको गठ’जोड बनाउन र टुटा”उन क्रिया शील देखिन्छ ।
“साविक नेकपाको एकताको लागि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको सक्रियता निकै बढ्यो । ओली–प्रचण्डको नेकपा विवाद लाई मथ्थर बनाउन उन को भूमिका सशक्त पनि देखियो । यस’क्रममा उनी शीतल निवास, ‘बालुवाटार, खुमलटार, कोटे’श्वर र डल्लु निवास चाहा रिन् ।
“तर, नेकपा विवाद केही समय मथ्थर भए पनि पछि फेरि चर्किएर आयो । ओली र प्रचण्ड– नेपाल समूहमा नेकपा विभाजित हुँदै आ’यो । नेकपा नै फु’ट्न अवस्था आएपछि राजदूत यान्छीले फेरि स”क्रियता बढाइन् ।
“तर, आफ्नो सक्रियताले नेकपा जोगाउन नसक्ने भएपछि राजदूत यान्छीले यसबारे बे’इजिङलाई जानकारी गराइन् । र बेइजिङ बाट एक उच्चस्तरीय टोली गत मंसिर १४ गते काठमाडौं आयो ।
“यस अघि र पछि राजदूत यान्छीले नेकपा एकताको लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पुष्प”कमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरुसँग भे’वटवार्ता गरेकी थिइन् ।
“तर, पछिल्ला केही महिना यता प्रधानमन्त्री ओलीसँग राजदूत यान्छीको भेटवार्ता भएको छैन । राजदूत यान्छी किन बालुवाटार छिर्दिनन् ?नेपालको विकसित राजनीतिक घटना क्रममा चीनले खुलेरै चासो राखेको छ ।
“साविक नेकपाको एकता होस् वा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएपछि किन नहोस्, राजदूत यान्छीको सक्रियता रोकिएको छैन । तर, पछिल्ला महिनामा उनले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरेकी छैनन् ।
“राष्ट्रपति भण्डारी, प्रचण्ड, नेपाल, झलनाथ खनाल सहितका नेताहरुसँग भेटवार्ता गर्ने गरेकी उनी बालुवा टार भने छिरेकी छैनन् । करिब चार महिनाभन्दा बढी समयदेखि राजदूत यान्छीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेकी छैनन् ।
“प्रधानमन्त्री ओली र राजदूत यान्छीबीच सम्बन्ध राम्रो नरहेको बताइएको छ । साविक नेकपाको एकताको लागि भन्दै सक्रिय रहेकी राजदूत यान्छीलाई आफ्नो आन्तरिक विषयमा चासो नराख्न प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिए पछि उनीहरुबीचको सम्बन्धमा चिसोपना आएको एमाले का एक नेताले जानकारी दिए ।
“ती नेताकाअनुसार प्रधानमन्त्री ओली स्वयं राजदूत यान्छीसँग भेट्न चाहँदैनन् ।प्रधानमन्त्री ओलीले भेट्न नचाहेर हो या स्वयं राजदूत यान्छीले नचाहेर हो, यसबारे केही खुलेको छैन । तर, राजदूत यान्छीको बालुवाटार प्रवेश भने लामो समयदेखि भएको छैन ।
“राष्ट्रपति भण्डारी, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपालसहितका नेतालाई भेट्दा प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट नभएको देख्दा धेरैले उनीहरु बीच सम्बन्ध राम्रो नरहेको अड्कल गरेका हुन् ।क्यानडा नेपाल।
यो पनि,, माधव र रावल न’स`च्चिए थप कार’वाही गर्ने ओलीको चे`ता’व’नी
“काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरि’ष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र भीम रावललाई ६ महिना नि’लम्बन गरेपछि स’च्चिने अन्तिम मौका भएको बताएका छन् । सोमबार अध्यक्ष नेता नेपाल र रावलमाथि का’रवा’ ही गर्दै अध्यक्ष ओलीले चे’ता’वानी दिएका हुन् ।
“पार्टी वि`रोधी गतिविधि’हरु कायमै राखेमा नि’लम्बनको अवधि बीचमै थप का’र’र्वाही गर्न सकिने ब्यहोरा समेत जानकारी गराउँछु’ भनिएको छ । नेपाल र रावल”लाई कारवाही गरिएको पत्रमा पार्टी एकतालाई वि’खण्डन गर्ने, पार्टी फुटाउने, पार्टीभित्रको सदभावलाई क्षतविक्षत पार्ने गरी गुट भेला गर्ने गरेको दा’बी गरिएको छ ।
“त्यस्तै स्प’ष्टीकरणमा सोधिए अनुसार त्रुटी स्वीकार नगरिएको, आत्मआलोचना गर्ने प्रवृत्ति नदेखाएको उल्टै स्पष्टी’करण सोध्ने जस्तो अनाधिकृत र हास्यास्पद कार्य गरेको उल्लेख छ ।
“त्यस्तै कार्वाहीमा पार्टीकै लागि एकताका लागि भन्दै भ्रम फिजाएर कार्यकर्ता फसाउने र आफ्ना गलत उद्धेश्य तथा मनसायको निम्ति दुरुपयोग गर्ने सम्भवना देखिए””कोले का’र ‘वाही गरिएको उल्लेख छ । दुबै नेतालाई पार्टीको विधान २०४९ (संशोधन २०७१ समेत) को धारा ४९ ख बमोजिम का’रवा’ही गरिएको उल्लेख छ ।
“काठमाडौं । नेपाल क’म्युनिष्ट पार्टी एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अब केपी शर्मा ओलीका वि’रु’द्धमा देशव्यापी अभियान चलाइने बताएका छन् । उनले “देशै भरिका कार्यकर्ता हरुलाई मैदानमा उत्रन आह्वा”नसमेत गरेका छन् ।अध्यक्ष ओलीले सोमबार माधव नेपाल र भीम रावललाई ६ महिनाका लागि निलम्वन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै नेता नेपालको आक्रामक प्रतिक्रिया आएको हो ।
“बरिष्ठ नेता नेपालले केपी शर्मा ओली एमालेको अध्यक्ष नरहेकाले उनमा कारवाही गर्ने कुनै अधि कार नरहे”को बताए । ओलीले आफैं केन्द्रीय कमिटी भंग गरेको अव स्थामा यसरी कारवाही गर्न नमिल्ने उनले बताए ।नेता नेपालले भने, ‘केपी ओली अहिले नेकपा एमालेको अध्यक्ष पनि होइन ।
“ओलीले निलम्वन गरेको पत्र आफूले नपाएको बताउँदै नेता नेपालले अब देशव्यापीरुपमा ओलीविरु’द्ध उत्रन कार्यकर्ताहरुलाई आह्वान समेत गरे । नेपालले रातोपा टीसँग भने, ‘अब केपी ओलीका विरु’द्धमा देशव्यापी अभियान चलाइन्छ ।’